“Arsenal waxay u baahan tahay waqti si ay ula qabsato Falsafadeyda” – Mikel Arteta – Gool FM
(Arsenal) 23 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ammaanay ciyaartoydiisa sida ay kaga falceliyeen falsafadiisa, laakiin waxa uu shaaca ka qaaday in Gunners ay waqti u baahan tahay si ay ula qabsado hab ciyaaredkiisa.
“Maxaan ku sheegi karaa waxaan ku faanayaa in aan macallin u ahay koox kubadda cagta waqti xaadirkan run ahaantii aad baan ugu faraxsanhay sida qof walba oo adduunka joogo uu kaga falcelinaayo.” ayuu yiri .
“Ciyaartoyda waxay bixiyaan dareen aad u xoogan iyo tamar si malin walba ay u soo bandhigaan sidaas si la mid ah Shaqaalaha iyo qof walba oo halkan ku nool, waxaan heysanaa sheeyal badan oo aan ku sameyn karno sare u kac, waa sida aan dareemeyno 8 bilood ka hor mana ahan waqti fog.
“Waqti badan ayaan sugeynay si aan u gaarno habkan, si aan u hormarino sheeyo badan, taas oo aan doonayo in aan ku hormarno, marka waxaan u baahan nahay waqti.
“Waa inaan sii wadnaa waxyaabaha wanaagsan ee aan sameyneeno markaa laga yaabee inyar oo heerar hoose ah oo horumar ah oo aan higsaneyno si aan u gaarno hadafkeena” ayuu yiri Mikel Arteta.